12 Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/05/2021)
Kusuka kumabhayisikobho ayizintandokazi zawo wonke umuntu waseYurophu “amagquma ayaphila ngomsindo womculo”. Ngempela okulandelayo 12 izintaba zizokwenza ucule futhi inhliziyo yakho idanse. Kusukela e-Alps nasePyrenees edumile kuya e- amagugu afihliwe weCzech Republic, sihlanganyele ekukhuphukeni okuya ku- 12 izintaba ezinhle kakhulu eYurophu.
1. Intaba yaseMatterhorn ESwitzerland
Ukusuka eGornergat kuye eziqongweni zezintaba zaseRothorn, IMatterhorn inganconywa kusuka noma ikuphi eZermatt. Isigqoko seqhwa iMatterhorn nefomu laso elingunxantathu, dala ukubukwa kwezintaba okuhle ngokungakholeki.
Ngentwasahlobo noma ebusika, iMatterhorn edumile iyindawo emangalisayo yeholide ezintabeni. Ungathola iMatterhorn eSwitzerland Alps bese ukhetha phakathi ukukhuphuka 4,478 amamitha, ukuhamba ngezinyawo emzileni odume kakhulu usuka eZermatt udlula eHornli Hut.
Ukunyuka kweMatterhorn kungenye yezintaba ezinhle kakhulu eYurophu, ejulile emadlelweni aluhlaza aseSwitzerland. Ngakho, uzoba nezindawo eziningi zokuthwebula okuhle nokubamba umoya wakho ngenkathi ubabaza ubuhle bemvelo.
2. IJungfrau Esigodini saseLauterbrunnen, Switzerland
Esigodini esihle seLauterbrunnen kanye ne izwe le 72 izimpophoma, uzothola uhla oluhle kakhulu lwe-Jungfrau. Ngezinye 4,158 amamitha, IJungfrau iyintaba ephakeme kunazo zonke eBernese Alps.
Nalapha, ungakhetha ukukhuphuka noma ujabulele ukubukwa kwezintaba okumnandi kweJungfrau kusuka esitimeleni sezintaba eziphakeme kunazo zonke eYurophu. Kusuka ohlangothini olulodwa iMittelland kuze kufike eVosges, neqhwa le-Aletsch ngakolunye uhlangothi lwakho, kuphefumula ngokuphelele.
3. I-Grossglockner E-East Tyrol, Austria
Intaba ephakeme kunazo zonke iGrossglockner izungezwe yi 266 iziqongo ezincane kulokho okubizwa ngokuthi uphahla lwase-Austria. Lezi zintaba zakha enye yezindawo ezinhle kakhulu zokubuka izintaba eYurophu. IGrossglockner ime yinde 3,798 amamitha, neGrossvenediger e 3,666 amamitha, ukudala enye yezindawo ezinhle kakhulu zokubukwa kwezintaba e-Austria.
Uzothola lezi 2 imidondoshiya eHohe Tauren esiqiwini. Lapha ungahamba ngokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukunyuka izintaba noma ukuqwala amatshe. Ngale ndlela ungancoma ukubukwa okuhle kakhulu kunoma iyiphi i-angle.
IVienna eya eLandeck Ischgl Enesitimela
EMunich kuya eLandeck Ischgl Ngesitimela
ISalzburg iya eLandeck Ischgl Enesitimela
I-Zurich eya eLandeck Ischgl Enesitimela
4. Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu: Okuphakeme kweDachstein ku Austria
Intaba yesibili ephakeme kunazo zonke e-Austria yiHoher Dachstein, elisendaweni enhle yaseHalstatt. UHoher Dachstein unikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwezintaba namachibi ebusika nasehlobo. Ehlobo, uzobabaza intaba eluhlaza neqhakazayo yekarst. ebusika, hamba ushushuluze usuka esiqongweni sentaba.
Nokho, ukubukwa kwezintaba okuhle kakhulu eHallstatt kufanele kube se- 5 Iphuzu leminwe yeLake Hallstatt. Uma uvakashela kusuka ngo-Ephreli kuya kuSepthemba, gqoka izingqimba ezifudumele zasebusika, ngoba kusengaba neqhwa futhi kubande ngalesi sikhathi sonyaka. Ungafinyelela lo mbono omangalisayo ngemoto yekhebula ngaphandle kokuthi ukhetha ukuhamba izintaba kuze kube sekuhlangenwe nakho okuvuzayo nokujabulisayo.
5. I-Chamonix-Mont-Blanc, France
IChamonix iyintaba ephakeme kunazo zonke e-Alps. Vele 15 imizuzu ukusuka emngceleni, IChamonix iyisimangaliso sasebusika. Lapha, uzoshaywa umoya ngokubukwa okuhle kweMont Blanc.
Ungenza isitimela seMont Blanc, noma uthande ukubukwa okuhle kwezindawo zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela eziseChamonix town. Ngaphezu kwalokho, ungakhuphukela e-Aiguille du Midi noma eMer du Glace. Noma yimuphi umsebenzi owukhethayo, ukubukwa okuhlaba umxhwele kwezintaba kwenye yezintaba ezinhle kakhulu eFrance kuzohamba nawe kuyo yonke indawo.
6. Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu: AmaPyrenees
AmaPyrenees amahle anikeza ukubukwa kwezintaba okuhle kakhulu. Izintaba eziyisikhombisa ziseFrance, amaVosges, abakwaJura, iMassif Central, i-Armorican Massif, kanye neCassican Massif.
Lezi zintaba zikhulu kangangokuba uzodinga ukunyuka usuka oLwandle i-Atlantic uye olwandle iMedithera. Ngeke nje ukwazi ukuvakashela amadolobha asendulo athabisayo, kodwa futhi uzoba nethuba eliyigugu lokubabaza esinye isimangaliso semvelo. Lesi simanga siyimpophoma iGrande Cascade de Gavarnie noma iGavarnie. Ngethonsi le- 422 amamitha, iyimpophoma yesibili ngobukhulu eYurophu.
Ngakho-ke, izithombe zakho zizoba yiNational Geographic ngokuphelele.
7. Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu: UVal Thorens EFrance
Phezulu phezulu e- 2300 amamitha e-French Alps, izintaba zeqhwa iVal Thorens yizintaba ezinhle kakhulu ebusika. Shelelisela emithambekeni, unenkomishi kakhokho eshisayo emlilweni, noma ukujabulela ukubukwa okuvela emotweni yekhebula, ukubukwa kuyamangalisa impela.
Nokho, ngenkathi iningi liya eVal Thorens lishushuluza, kuyamangaza impela kunoma iyiphi enye inkathi. Isigodi iTarentaise sigcwele izindlu ezinhle zekotishi, izimfunda, kanye nomfula i-Isere, ngezintaba iVal Thorens ngemuva, dala ubuhle bendawo obuthandayo unyaka wonke.
8. AmaDolomites E-Italy
Lapho ungakhetha kusuka ku- 7 amaphuzu wokubuka, le ndawo iyamangalisa ngokwanele ebukekeni. Izintaba zaseDolomites ziseNingizimu ye-Italy, zingesinye seziqiwi zemvelo ezinhle kakhulu eYurophu. Ngaphezu kwalokho, ingenye yezindawo zokuhamba izintaba ezithandwa kakhulu emhlabeni.
Ungakhetha ukuncoma amaDolomites ohambweni losuku ukusuka eBolzano, noma ohambweni lwamakhilomitha angama-20. Imisebenzi, izindawo zepikiniki nezithombe, futhi izintaba, akupheli. Ukubeka konke phezulu, ukubukwa kuyamangalisa ngokuphelele, nganoma yisiphi isikhathi ohambweni lwakho.
Ngazo zonke izizathu ezibalwe ngenhla, amaDolomites ayindawo ekahle yokuphumula eentabeni zase-Italy.
9. Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu: INtaba iSnowdon E-Wales
INtaba iSnowdon yinhle kakhulu kangangokuba akumangazi ukuthi inohlelo lwayo lokuhamba. I-Snowdon itholakala eWales, nangemva kwe- a 6-8 ukunyuka kwamahora, ungancoma ukubukwa okuhle kwe-Snowdonia, I-Anglesey, Pembrokeshire, kanye ne-Ireland.
Ngaphezu kwalokho, kusuka ekuphakameni kwe- 1085 amamitha, uzokwazi futhi bheka wonke amachibi amahle. Ngokwesibonelo, ichibi laseCwellyn neMynydd Mawr banikela ngemibono emangalisayo ekupheleni komzila wechibi uCwellyn.
10. I-Adrspach-Teplice ECzech Republic
ICzech Republic yaziwa kakhulu ngePrague enhle. Bambalwa kakhulu abazi ngeBohemia emangalisayo nedolobhana ledwala, I-Adrspach-Teplice. I-Adrspach itholakala eduze komngcele wasePoland futhi ifanelwe ngokuphelele indawo Izimangaliso zemvelo zaseYurophu ezimangalisayo.
I-Adrspach-Teplice yidolobhana elakhiwe maphakathi nokwakheka kwamatshe, ukwakhiwa okude, nge-labyrinths, umfudlana owolintshi, nemizila. Le ndawo ekhangayo yatholakala kuphela ku- 1824. Kusukela lapho bekuyindawo ekhethekile yabahambi abafuna okungajwayelekile.
Lapha, ungahamba umzila we-loop, ngesango lamaGothic nezindima eziyimfihlo. Akukho okufana nokubabaza ukwakheka kwamatshe amangalisayo ngaphakathi futhi ufinyelele echibini eliluhlaza okwesibhakabhaka. Njengoba uzobe uhamba enhliziyweni yalawa matshe amakhulu, kungcono ukuvakashela ehlobo, lapho izinsuku zinde futhi kunokukhanya okuningi.
11. Isifunda saseMullerthal eLuxembourg
Ngezinye ze imibono emihle kakhulu eYurophu, izintaba ze-Mullerthal eLuxembourg zinikeza izindlela ezinhle nezindawo ezifihliwe ezingaziwa. Njengoba uhamba ungena emahlathini, kudlule amachibi neziphethu, amagquma amatshe aluhlaza, uzothola ukuthi ungene enganekwaneni yezingane.
Isifunda saseMullerthal sinezindawo ezithile ezikhethekile kakhulu nokubukwa eYurophu. Izinqaba, imihume, amabhuloho, nezimpophoma, kukhona ukubukwa okuhle nomaphi lapho ubheka khona. Ngakho, ukuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili, qiniseka ukwenza okungenani izinsuku ezimbalwa, ukubabaza ukubukwa okuhle kwezintaba kweMullerthal.
12. Izintaba Ezinhle Kakhulu EYurophu: I-Stanserhorn, Switzerland
Iziqongo ezineqhwa, amagquma aluhlaza ogqamile, nezindlu ezihehayo ezisemaphandleni, imibono evela eStanserhorn iyona ethandekayo. Intaba enhle yaseStanserhorn ilungile 20 kude noLucern ngesitimela futhi wenza uhambo oluhle losuku iSwitzerland enhle.
Lapha ungathatha imoto yekhebula uye phezulu esiqongweni sentaba ngemibono emangalisayo ye-panoramic yamaSwitzerland Alps namachibi. Enye indlela enhle yokuncoma ukubukwa okuhle kwezintaba zikaStanserhorn ukukhetha i- indawo yepikinikini. Ngale ndlela uzobe uchitha usuku uphumule futhi uphefumula ngobuhle nase-Alps’ umoya omusha.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho ku- 12 izintaba ebabazekayo kakhulu eYurophu ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izintaba Eziningi Ezihle kakhulu EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2F‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Amadinga IntabaRange Izintaba I-MountainViews Okuhle kakhulu I-PicturesqueMountains Ukubukwa kwendawo